Uprofita: "Sezvo sarudzo muIsraeri, asi hapana hurumende achiumbwa pedyo nokuuya kwaMesiya"
Sei mamiriro ezvinhu zvino muIsraeri.
Newspaper clippings pamusoro Yitzhak Kaduri.
Inguva yokutanga munhoroondo yevaIsraeri kuti hwakundikana vaumbe hurumende. Mukuwedzera, mufananidzo kuti vaIsraeri vakanga sarudzo mbiri gore rino, asi zvakaita kuti hurumende.
fredag 13 december 2019 23:03 📧
Pane uprofita-makore 40 kuti ikozvino zvinogona chokuita kuti kuitika muIsraeri.
Uprofita hwacho anobva Rabbi Yitzhak Kaduri aiva zvinoshamisa murume Ona mufananidzo pamusoro. Kwete chete nokuti akanga makore 108 paakafa muna 2006.
Akanga ari chaizvo, vakadzidza uye vakada mudzidzisi vaJudha vakawanda. Ndizvo zvakaitika, rinopa nhamba yevaya vaitevera nomudungwe ake pamariro kwaiteverwa pamusoro 300,000 uye Jerusarema nokufukidzwa mapepa kuti akaparidza pakuchema mukupera Rabbi Yitzhak Kaduri zvakanaka.
mararamiro ake akanga nyore chaizvo. Akararama upenyu urombo, akadya zvishoma, akataura uye kashoma akataura. Pasinei neizvi, akakunda vazhinji nzeve dzevanhu, kana akaita chinhu.
Akataura kashoma, asi kana akaita zvakanyorwa pasi zvaakataura. Makore 40 apfuura, vakamukumbira kuti Mesiya kunoonekwa inoshanda zvematongerwo enyika vaIsraeri, kana waiona ikoko? Mhinduro yake yaiva pfupi:
"Sezvo sarudzo muIsraeri, asi hapana hurumende achiumbwa pedyo kuuya kwaMesiya."
Sei mamiriro ezvinhu zvino muIsraeri. Inguva yokutanga munhoroondo yevaIsraeri kuti hwakundikana vaumbe hurumende. Mukuwedzera, mufananidzo kuti vaIsraeri vakanga sarudzo mbiri gore rino, asi zvakaita kuti hurumende.
Chokwadi, zvose uprofita akaongorora asi varege achazvidzwa, inoti ndima pfupi iyi:
"Usazvidza uprofita." 1 Th. 5:20.
It chaizvo nguva kuziva kuti Jesu anogona kuuya chero nguva! Hatikwanise ngaanyarare uprofita hunoshamisa uhwu. Zvino pane mutoro munhu anoverenga mashoko sei kuti sei.
Vazhinji acharamba ichi uye vazvidzivirire naro. Ose kunopesana ichi zvirokwazvo achauya.
Zviri munharaunda iyi iri Swedish Christianity akashayiwa kwazvo kunzwisisa weboka zviitiko hwaswedera rouprofita, nei regai kutaura nezvaJesu 'kudzoka.
Jesu akafanotaura kuti vanhu vakawanda pachinzvimbo vane mafungiro kune shoko kudzoka kwaJesu uye anotenda kuti izvi hazvigoni kuitika zvino. Izvi chakakomba Jesu panodana muranda zvakaipa kudaro!
"Asi kana muranda akaipa uye oti mumwoyo make, tenzi wangu kunonoka". Matt. 24:48.
Pano unogona kuedza pachako toreva mashoko aya aJesu kana zviri izvo Jesu anoti, muranda wakaipa.
Hazvisi isu vanoti pasina Jesu. Izvi hazvina kunyorwa here mhosva muranda waIshe pasina kamwe zvakare murudo kuedza kuunza basa uye kuzvidzora.
Hatisi kuponeswa kana kurarama upenyu wenhema, sununguka kuti nesu saka isu kwenguva. Iye zvino haisi kusunda kuti kusarudza matanho, nguva dzose kunogona kunonoka!